के सलमान खानले हलिउड अभिनेत्री सामन्था लकवुडलाई डेट गर्दैछन् ? सलमानको जन्मदिनमा पनि पुगेकी नायिकाले खोलिन् रहस्य - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / के सलमान खानले हलिउड अभिनेत्री सामन्था लकवुडलाई डेट गर्दैछन् ? सलमानको जन्मदिनमा पनि पुगेकी नायिकाले खोलिन् रहस्य
सलमान खानको प्रेम जिवन निकै गहिरो भएको छ । जसका कारण सलमानको लभ लाइफ अक्सर चर्चामा रहन्छ । धेरै अभिनेत्रीहरुसँग सलमान खानको प्रेम रहेको खबर आएपनि अभिनेताले आफूलाई सधैं सिंगल बताउदै आएका छन् । हाल सलमान खानको नाम हलिउड अभिनेत्री सामन्था लकवुडसँग जोडिएको छ । यी दुईको प्रेमको खबर फैलिएको छ ।
अभिनेत्रीले सलमानसँगको आफ्नो प्रेमको सत्यता बताइन्
अब प्रश्न उठ्छ कि सामन्था लोकवुड साँच्चै सलमान खानकी नयाँ प्रेमिका हुन् ? सलमानसँगको प्रेमको खबरमा सामन्था लोकवुड आफैंले बोलेकी छन् । बलिउड हंगामामा उनको नयाँ अन्तर्वार्तामा सामन्था लोकवुडले सलमानसँगको आफ्नो स म्ब न्ध मा मौनता तो ड् दै भनिन् – मलाई लाग्छ मानिसहरू धेरै कुरा गर्छन्। मलाई यो पनि लाग्छ कि मानिसहरू केहि नभए पनि धेरै कुरा गर्छन्। मैले सलमानलाई भेटेको छु, उहाँ एकदमै राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ। यसबारेमा भन्नु यति मात्रै हो । मानिसहरूले यति धेरै विचार कहाँबाट ल्याउछन्, मलाई थाहा छैन।
अभिनेत्रीले थप भनिन्, ‘मेरो मतलब मैले उनलाई भेटें, मैले ऋतिक रोशनलाई भेटें । तर ऋतिक र मेरो बारेमा कसैले केही भनेनन् । त्यसैले मलाई थाहा छैन यी समाचारहरू कहाँबाट आउँछन्। सामन्था लोकवुडले पनि आफ्नो अन्तर्वार्तामा सलमानको फिल्म सुल्तान उनको मनपर्ने बलिउड फिल्म भएको बताइन् ।
सलमानको जन्मदिनको पार्टीमा सामन्था लोकवुड पुगेकी थिइन्
सामन्था लोकवुड केही दिन अघि पनवेल फार्म हाउसमा सलमानको जन्मदिनको पार्टीमा सहभागी भएकी थिइन् । पार्टीको बारेमा कुरा गर्दै सामन्था लोकवुडले आफूले सलमानलाई पार्टीबाट मात्रै चिन्नुपर्ने बताइन्, तर यसअघि सलमानसँग २–३ पटक भेट भइसकेको थियो । त्यसैले उनी सलमानलाई मात्र चिन्थिन् । उनले सलमानको बर्थडे पार्टीमा गएपछि भने अरुलाई पनि चिनेको बताइन् । उनले पार्टीमा उपस्थित सबैको प्रशंसा पनि गरीन् ।
गत महिना जब सामन्था लोकवुड मुम्बई आएकी थिइन्, उनले ऋतिक रोशनलाई भेटेकी थिइन्, उनले आफ्नो इन्स्टाग्राम ह्यान्डलमा ऋतिकसँगको फोटो पनि सेयर गरेकी थिइन् ।